Sun May 19, 2013 22:07:49
တူခာိးိုံင်ငံသားတြေ လိုပဲူမန်မာ့ အမဵြိး သမီးတေဟြိာုိံင်ငံရေး ဖြိံပ်မြ အောက်မြာ နေႚစဉ် အသက်႟ငြ် ႟ုန်းကန် နေရပၝတယ်။ ဒၝပေမဲူ့မန်မိာိုံင်ငံက အမဵြိး သမီးတေဟြာ ထူးခားတဲူ့င်္ပံနာတြေ၊ ထူးခားတဲ့ မတရားမြ တေနြဲႚလည်း ရင်ဆိုင် နေရပၝတယ်။ စစ်သားတြေ အဓမ္ထ ကဵင့်ဋ္ဌကံမကြို ခံရလေ့႟ြ္ဘိပီး စစ်တပ်ကူမန်မာ အမဵြိး သမီးတေကြိုပည့်တန်ဆာ အူဖစ် ရောင်းတယ် လိုႚလည်းေူပာနေုက ပၝတယ်။ BurmaGuide.Net ရဲႚ ဒီ အပိုင်းမြာူမန်မာ့ အမဵြိး သမီး အဖြဲႚ အစည်းတြေ၊ အမဵြိး သမီး အခငြ့် အရေးနဲႚ အမဵြိး သမီး ရေးရာတေနြဲႚ ပတ်သက်္ဘပီး ဆောင်႟ကြ် နေတဲိုံ့င်ငံတကာ အဖြဲႚ အစည်းတြေ ဆိုင်ရာ အထောက် အကူပြ အခဵက် အလက် အကဵဉ်းခဵပ်ြတြေ ပၝပၝတယ်။ BurmGuide.Net “အမဵြိးသမီးမဵား” အထောက် အကူပြ အခဵက် အလက် အကဵဉ်းခဵပ်ြမြာ ႟ြာပၝ။
ိုံႛဆီခက်ြလောက်မြ တန်ဖိုးမရြိ၊ူမန်မိာိုံင်ငံရြိ လူႛအခငြ့်အရေး ခဵြိးဖောက်မမြဵား Valued Less thanaMilk Tin - Human Rights Abuses in Burma စာမဵက်ြိာံ ၄၈ မဵက်ြိာံပၝသော ယခုအစီရင်ခံစာတငြ် ...
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကဵင်တငြ် အုကမ်းဖက်မမြဵား ဋ္ဌကံတြေႛနေရူခင်း၊ူမန်မာ ဒုက္ခသည်မဵားအုကား အိမ်တငြ်းအုကမ်းဖက်မြ "Facing Violence Amongst Ourselves" Domestic Violence among Burmese Refugees စာမဵက်ြိာံ ၈ မဵက်ြိာံပၝသော ယခုအစီရင်ခံစာတငြ် ...
လုံ္ဘခံသြောနေရာမရြိ No Safe Place. စာမဵက်ြိာံ ၄၀ ပၝသော ယခုအစီရင်ခံစာတငြ် ...
တိတ်ဆိပ်မကြ္ဘိုဖိခြဲူခင်း� ကရင်ူပည်နယ်အတငြ်း နအဖစစ်တပ်က လိင်စော်ကာူးခင်းကို လက်နက်သဖယြ် အသုံူးပနြေူခင်းကို ကရင်အမဵြိးသမီးမဵားက ထုတ်ဖော်ေူပာုကာူးခင်း Shattering Silences; Karen Women speak out about the Burmese Military Regimes use of Rape asaStrategy စာမဵက်ြိာံ ၉၇ မဵက်ြိာံပၝသော ယခုအစီရင်ခံစာတငြ် ကရင် ...
မုဒိန်းကဵင့်ခငြ့်လိုင်စင် License to Rape ယခုအစီရင်ခံစာတငြ် အမဵားအာူးဖင့် ၁၉၉၆ ခိုံစ်ြမြ ၂၀၀၁ ...
အမဵြိးသမီးမဵားအဖြဲႛခဵပြ် (ူမန်မိာိုံင်ငံ) Women’s League of Burma အမဵြိးသမီးမဵားအဖြဲႛခဵပြ် (ူမန်မိာိုံင်ငံ)ကို ...
ကရင်အမဵြိးသမီးအစည်းအရုံး Karen Women’s Organization (KWO) ကရင်အမဵြိးသမီးအစည်းအရုံးသည် ...
ရမြ်းအမဵြိးသမီးလပ်ြရြားမကြန်ြယက်အဖြဲႛ Shan Women’s Action Network (SWAN) ၁၉၉၉ ခိုံစြ် မတ်လတငြ် ထိုင်ိးိုံင်ငိံငြ့် နယ်စပ် ...
WEAVE (Women’s Education for Advancement and Empowerment) WEAVE သည် ထိုင်ူးမန်မာနယ်စပ်ရြိ တိုင်းရင်းသား ...
အရြေႛိံငြ့်အရြေႛတောင်အာရဒြေသအတငြ်းရြိ အမဵြိးသမီး၊ လိင်ကြဲူပားမအြူမင်ိံငြ့် အေအိုင်ဒီအက်စ် လက်စြဲ Women, Gender and HIV/AIDS East and Southeast Asia Kit
အမဵြိးသမီးမဵား၏ ပၝဝင် ဆောင်ရက်ြမြ၊ ကမႝာလုံး ဆိုင်ရာ အစီအစဉ် မဵား
ဘီဂဵင်းညီလာခံနောက်ပိုင်ူးမန်မာူပည်ရြိအမဵြိးသမီးမဵားအေူခအနေ တိုးတက်လာမရြိပၝသလား။ Any Progress for the Lives of the Women of Burma Since Beijing? ကမ္တောဒီးယာိးိုံင်ငံ၊ အမဵြိးသမီး ရေးရာ ဝန်ဋ္ဌကီး ဌာန IFAD - ကဵား-မ ကြဲူပားမြိံငြ်ႚ ပတ်သက်သည့် အထောက်အကူ လမ်းညန်ြမဵား
အမဵြိးသမီးမဵား အတကြ် ခေၝင်းဆောင်မြ သင်တန်း လက်စြဲ စာအုပ် အမဵြိးသမီးမဵားအပေၞြိံပ်စက်ူခင်း၊ ရက်စက်စြိာံငြ့် လူမဆန်စြာ င်္ီငြ်းပမ်ူးခင်းမဵာိးံငြ့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကဵြိးဆက်မဵား Torture, cruel, inhuman and degrading treatment of women: Psychological consequences
႟ထြောင့်၊ ထင်ူမင် ယူဆခဵက်၊
အူပစ်ဒဏ်မြ ကင်းလတ်ြခငြ့် စနစ်၊
ကုလသမဂ္ဂ လုံ္ဘခံရြေး ကောင်စီ ဆုံူးဖတ်ခဵက် (၁၃၂၅)